७७ हजार युवाको लोक सेवा आयोगमा दिएको आवेदन अन्यौलमा, के गर्दैछ अव सरकार ? - सुनाखरी न्युज
७७ हजार युवाको लोक सेवा आयोगमा दिएको आवेदन अन्यौलमा, के गर्दैछ अव सरकार ?
Posted on: June 11, 2019 - 5:07 pm
लाक सेवा आयोगले माग गरेको विज्ञापनमा आवेदन दिने ७७ हजार युवाको आवजेदलन अन्यौलमा परेको छ । संसदीय समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएसँगै यसअघि आवेदन दिनेकोके हुने भन्ने अनइैलता उत्पन्न भएको हो ।
सरकारले लोक सेवा आयोगमा दिएको आवेदनलोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्नु पर्ने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र ऐनसम्बत नै रहेको बताए।
‘निर्देशनकर्ताको प्रमुख भूमिका र लोकसेवा आयोगको भूमिकाबारे थप कानुनी छलफल गर्न बाँकी नै छ’, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगको नयाँ कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पण्डितले भने, ‘सरकार अहिले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र ऐनसम्बत् नै रहेको कुरामा दृढसंकल्पित छ।’
समितिको निर्देशनमाथि नै प्रश्न उठेकाले समितिले यसको जवाफ दिनु पर्ने उनको भनाइ छ। लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएको बताउँदै पण्डितले आयोग स्यम् समावेशी भएकाले यी प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको स्पष्ट पारे। समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि परीक्षाका लागि आवेदन दिइसकेका ७७ हजारभन्दा बढी युवा मर्कामा परेका छन्। संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरु अन्योलमा छन्। लोक सेवा आयोगले यही जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। यही विज्ञापन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै समितिले खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
सुनको अवैध कारोवार जारीः एउटै पसलबाट छ महिनामा डेढ क्विन्टल अवैध सुन बिक्री भएको भेटियो
मनसुन बंगालमै रोकिँदा बढ्यो गर्मी
गुठी विधेयक विरुद्ध आन्दोलन घोषणा, १० गते उपत्यका बन्द आव्हान, प्रधानमन्त्री भन्छन्ः भुलवस गल्ति भएको भए सच्याउन सकिन्छ